GAAS: Madaxweyne mise hoggaamiye beeleed?! - Caasimada Online
Home Maqaalo GAAS: Madaxweyne mise hoggaamiye beeleed?!
GAAS: Madaxweyne mise hoggaamiye beeleed?!
Dr. Gaas, waxaa uu ku guulaystey jagadaas madaxwaynimo ee Dowlad Goboleedka Puntland asiga oo helay HAL COD oo keliya, taasoo ka turjumaysa in uu san haysan aqlabiyad aad u balaaran iyo kalsoonida guud ee dadka reer Puntland.
Si kastaba ha ku helee jagadaas, waxaa soo cadaanaysa in uu u dhaqmo sida hogaamiye beeleed meeshii uu kasban lahaa bulshadda inteeda kale. Sidoo kale, waxaa soo baxaaya ififaalo cadaynaaya in dadka inta badan u arkaan maamulkiisa mid si bareer ah, isla markaana xishood dari ah, uu ugu talax tegay awoodii lagu aaminay. Taasoo ay sababtey in uu burbur badan iyo hoos u dhac ku yimaado dhaqaalahii iyo amaankii ay dowladii hore ee dhacday ka tagtey.
Waxyaalaha ugu wayn ee ee dhacay, lana xusi karo, ayaa waxaa ka mida shaqaalihii iyo ciidankii Puntland ee waxqabadka iyo nabada ka shaqayn lahaa oo gaaray in ay ka cabtaan musharo la’aan. Arimahaas oo sahlay in dhaqaalahii iyo amaankii Puntland khalkhal uu galo. Waana mida kayntay in qaar ka mida Parliamentarian-ka Puntland codsadaan in cod qaadis loo qaado maamulka Dr. Gaas.
Sidaad la socotaan Madaxwaynahii hore ee Puntland Dr. Abdirahman Faroole, waxaa u xukun dhaxlay Dowladii isaga ka horaysay ee Madaxwayne Cade Muuse, iyada oo aan ciidan hagaan dhisan lahayn. Isla markaasna uu xunkunka ka degay iyada oo ciidan dhisan iyo shaqaale mooraalkooda dhisan yahay, kana adag shaqadooda uu jiro. Waxaase, dhaqan xumada, eexda maanta ka jirta Puntland sahlay in aysan jirin Dowlad dhexe, oo la xisaabtami karta Dowlad Goboleedyada.
Marka waxyaabaha uu Dr. Gaas ku soo kordhiyey Puntland, oo ay dadka siyaasada Puntland u dhuundaloola ka biyo diidsan yihiin, ayaa waxaa ka mida eexda ku salaysan “NAAS NUUJIS BEELEED”. Tusaale waxaa taas u ah in DUGSIGII POLISKA ee degmada CARMO uu cidla yahay, howshiisiina loo raray Degmada QARDHO, ee Gobolka KARKAAR. Dugsigaasoo uu furay Raysal wasaarihii ee Soomaaliya, ALI MOHAMED GEEDI. Dugsigaas oo loogu talo galay in lagu tababaro POLISKA Soomaaliya oo dhan. Waqtigan xaadirkana ay tabaradii loogu talo galay in dugsiga Degmada CARMO lagu qabto loo wareejiey magaalada QARDHO.
Waxaana ciidama beeleedkii ka soo baxay Dugsiga QARDHO ay yihiin kuwa maantay amaanka in ay sugaan loogu talo galay, laakiin u shaqeeya sidii ILAALO BEELEED, kuna howgala magaca maamulka Puntland. Waxaase aqristow su’aashu tahay, ciidamo BEELEED ma xaji karaan amaanka Puntland? Sidoo kale, arintaan waxay marqaati madoonto u tahay, nadhaamaka “NAAS NUUJISKA” oo ay dadka inta badan ku tuhunsan yihiin hogaanka Puntland haatan ka jira.
Sidoo kale, waxaa dhacday in hay’adaha UNta u qaabilsanaa QAXOOTIGA ka soo qaxay YEMAN ay booqdeen, jeclaysteena in Degmada CARMO la dejiyo QAXOOTIGA YEMINIYIINTA. Dr. Gaasna uu ku gacan sayrey, isaga oo u eexeenaya, isla markaana go’aankiisa ku salayey reer tolkiis in uu ku NAAS NUUJIYO – oo rabana in deegaanka gobolka BARI uusan yeelan wax awood dhaqaale iyo siyaasadeed, ayuu isla markiiba dhegax dhigay xeradana laga dhisi doono magaalada QARDHO iyadoo aan dan loo gelin arimihii ay codsadeen hay’adaha UNta ee u qaabilsan QAXOOTIGA YEMANIYIINTA ah.
Waxaa idiin soo aruuriyey: Mohamed Barre – Junlay ‘GOBDOON’, qoraa madax banaan, waxna ka qora arimaha Soomaalida, degana Magaalada Minneapolis, MN – junlay99@aol.com.